“Waxa uu la mid yahay Xavi” – Lionel Messi oo ammaan ugu qubeeyay Arthur Melo oo tagaya – Gool FM
“Waxa uu la mid yahay Xavi” – Lionel Messi oo ammaan ugu qubeeyay Arthur Melo oo tagaya
(Barcelona) 26 Juun 2020. Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa ammaan ugu qubeeyay laacibka khadka dhexe ka ciyaara ee Arthur Melo, isagoo ku tilmaamay inuu la mid yahay halyeyga Barca ee Xavi Hernandez.
Kooxda Juventus ayaa qarka u saaran dhammeystirka heshiiska Arthur uu ugu soo biirayo dhankooda, isagoo kooxda reer Spain goor hore kala heshiisay saxiixa kubbad qaabeeyahan da’da yar.
Balse 23-jirka reer Brazil ayaa taageere weyn iyo ammaan ka helay xiddigii ugu wanaagsanaa ee uu abid la ciyaaray, waxaana Messi uu xiddigan ku ammaanay qaab ciyaareedkiisa wanaagsan iyo awoodda uu u leeyahay inuu kubadda wax badan maareeyo.
Baraha bulshada ayaa laga soo helay muuqaal ee kabtanka Barca ku ammaanayo Arthur, xilli laacibkan uu ka sii hayaamayo kooxda Camp Nou ka ciyaarta.
“Waxa uu in badan shabbahaa Xavi, sida uu u jecel yahay inuu kubadda heysto, inuu baasas gaaban ciyaaro, inuusan kubadda lumin” ayuu yiri 33-jirka weerarka ka ciyaara.
“Waa uu adag yahay, waana uu iga yaabiyay.
“Arthur waxa uu leeyahay qaab ciyaareedka Barcelona, durba waxa uu fahmay tababarka, taageerayaashana way jecel yihiin ciyaaryahan ku wanaagsan kubbad heysashada” ayuu yiri Messi.
Muuqaalkan ayaa hadda laga soo helay baraha bulshada, waana wareysi uu horraan bixiyay laacibka reer Argentina, balse wali si cad ma uusan uga fal celinin arrinta la xiriirta bixitaanka Arthur Melo.
Kalidou Koulibaly oo qarka u saaran u dhaqaaqista Premier League... (Kooxda uu ku biirayo iyo qiimaha ay ku qaadaneyso)